League of Legends: Wild Rift - အောင်ပွဲခံဖို့ Beginner များအတွက်လမ်းညွှန် | Codashop Blog MM
League of Legends: Wild Rift – အောင်ပွဲခံဖို့ Beginner များအတွက်လမ်းညွှန်
ကဲကစားသမားများအားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား? Riot Games ရဲ့ League of Legends မှာ အောင်မြင်ပြီးသား Wild Rift ကတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီး နည်းဗျူဟာ တွေလိုအပ်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသော်လည်း မျှတမှုရှိပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ Multiplayer ဂိမ်းထဲကို သင့်ကိုယ်သင်နစ်မြုပ်လိုက်ပါ။ Rift ကို ခေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့သင်က Champions ကို ကစားနိုင်ပြီး တစ်မူထူးခြားပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲကလူတွေနဲ့ Mix and Match လုပ်နိုင်ပြီး အလွန်မိုက်စွာ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ Level တိုင်းမှာရှိတဲ့ ကစားသမားများနဲ့ အတူတူကစားနိုင်ပြီး Champion များကို ယူထားနိုင်ပြီး ရန်သူများရဲ့ Nexus ကိုတိုက်ခိုက်ကာ အနိုင်ယူလိုက်ပါ။
အခု Wild Rift က ကစားသမားများအားလုံးကစားနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့က ခုမှစကစားမည့်သူများအတွက် ဂိမ်းရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းအရာများအကြောင်းရေးထားတဲ့ လမ်းညွှန်ကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ အသိပညာသည် မိမိ၏စွမ်းအားတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဆိုသလိုပေါ့။ ကဲ စလိုက်ရအောင်။
Wild Rift မှာ Ahri, Jinx, Lux, Sona နှင့် Master Yi တို့အပြင် အခြား (League ရဲ့ Champion ပေါင်း ၁၅၁ ထဲမှ) Champion ပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါ၀င်ပါတယ်။ ဒီ Champion အမျိုးအစား တွေထဲမှာ Fighter, Tank, Mage, Assassin, Support နှင့် Marksman တို့ပါဝင်ပါတယ်။
မတူညီသော Champion အမျိုးအစားတွေ ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာ သင်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ League of Legends PC မှာ Mid Lane တွင် Kled (Tank / Fighter) Faker Play တွေ Top Lane မှာ Soraka (Support / Mage) ကဲ့သို့သော ရူးမိုက်သော ကစားကွက်များကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက Rank Games တွေမှာ တစ်ကယ် နိုင်နိုင်တဲ့အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ Roles ငါးမျိုး Wild Rift မှာ ရှိပါတယ်​ : Baron lane, Mid, Jungler and Dragon Lane (ADC & Support)။ ဂိမ်းရဲ့ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ Role တစ်မျိုးစီရဲ့ အကြောင်းကို နားလည်နိုင်ရင် သင်နိုင်နိုင်ချေများနိုင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အားလုံးက အစကနေ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သူတို့ကို Battle အတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်အောင် Rank လုပ်ရမှာပါနော်။ Runes ကို အသုံးပြုပြီး Abilities တွေကိုမြှင့်တင်ရမှာပါ။ Items တွေ၀ယ်ယူပြီး အနိုင်ရဖို့ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Top Lane ကတော့ Tank တွေနဲ့ Fighters တွေ တိုက်ခိုက်ရာ နေရာပါ။ Damage အများကြီး ခံနိုင်တဲ့ Fighters တွေက ဒီ Lane ကိုယူထားပြီး ရန်သူတွေရဲ့ Top Laners တွေနဲ့ ခေါင်းချင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Tank တွေက ရန်သူတွေကို ဖမ်းထားနိုင်ပြီး အဖွဲ့၀င်တွေကို ကာကွယ်ကာ အဖွဲအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရန် အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဂိမ်းပွဲချိန်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှ Top Lane မှာကစားသူတွေက Mid Lane ကိုလာပြီး Gank တွေပြင်ဆင်ကာ နီးစပ်ရာပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ပြီး Teleport Boot တွေကိုလည်းရယူကာ မြေပုံရဲ့တစ်ခြားနေရာတွေကို သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ Champion တွေကို မရွေးချယ်မှီ ဘာတွေကို စဥ်းစားသင့်လည်း
သင့်ရဲ့ အဖွဲ့မှာ Tank သို့မဟုတ် Damage Delear တွေလိုအပ်နေလားဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ Summoner Spell ကို သေချာချိန်ဆပါ။​ သင်က တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ချင်တာလား ၊​ ကာကွယ်ပြီး ကစားချင်တာလား ဆိုတာပေါ်မူတီပြီး ချိန်ဆပါ။
မြေပုံရဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ အတွက် Mid Laners တွေက Gank တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် Baron သို့မဟုတ် the Dragon တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေ အောင်ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ Mage နဲ့ တစ်ခြား High Burst Damge တွေခံနိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်တဲ့ Assassins တွေက Mid အတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့က Lane တစ်ခုလုံးကို ရယူထားရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းနဲ့ လုံခြုံသောနေရာကိုသွားရောက်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ အဖွဲ့မှာ​ Damage ပြင်းထန်စွာပေးနိုင်တဲ့ Crowd Controlling Abilities လိုတာလား တစ်ယောက်ထဲကိုဘဲ တိုက်ခိုက်တဲ့လူလိုတာလား။
သင်က Gank ကိုခံနိုင်တော့ ရန်သူတွေမှာ Jungler ပါလားကြည့်ပါ။​
Jungler ကတော့ သင့်အဖွဲ့ရဲ့ Composition ကို ကူညီနိုင်သလို ပြိုကွဲစေနိုင်ပါတယ်။ မြေပုံတစ်၀ိုက်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလည်းဆိုတာကို သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး Lane တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး Dragon နဲ့ Baron တို့လို အဓိကတွေကိုရယူဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ သင့် အဖွဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပြီး Neutral Creep တွေကို Farm ပြီး ပိုကောင်တဲ့ Items တွေကိုရယူပြီး Abilities တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။ Jungler တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနိုင်ရဖို့ မြေပုံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်း သိသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အဖွဲ့မှာ Damage Dealer (Assassin ကို ရွေးချယ်ပါ) ဒါမှမဟုတ် Fight Initiator ( Crowd Control Tank သို့မဟုတ် Fighter) တွေလိုအပ်နေလားဆိုတာ ကြည့်ပါ။
လူတွေခေါ်ကျတဲ့ ADC (Attack Damange Carry) ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ADC ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ Farm နိုင်စွမ်းနဲ့ Items တွေရယူနိုင်မှုတွေက လက်လှမ်းမှီနိုင်တဲ့ နေရာက ရန်သူတွေကို Damage ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ADC Champions တွေက ရန်သူတွေကို Damage မတရားကြီး ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် Health နဲ့ Defense တွေကို သတိထားရမှာမို့လို့ ကိုယ်ရပ်နေတဲ့ အကွာအ၀ေးကို သတိထားပါနော်။
ADC တွေ ကြားမှာ Communications နဲ့ Synergy ကတော့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ADC ရွေးချယ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်က သေချာတိုင်ပင်ယူသင့်တယ်နော်။
ဒါကတော့ လူကြိုက်နည်းပေမယ့် သေချာဆော့နိုင်ရင် Suppoer Champion တွေက သင်ကို အနိုင်ရရှိစေမှာပါ။ Rocket Grab of Blitzcrank, or the Crescendo of Sona. တို့မပါတဲ့ Rift လောကကြီးကတော့ မတွေးနိုင်စရာပါဘဲနော်။ Support Champion တွေက ADC တို့ Mid တို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့က ရှေ့ဆောင်ကာ Ganks ကို စတင်နိုင်ပြီး ရန်သူ Champions တွေကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး စတင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့ကလူတွေ မြေပုံကောင်းကောင်း မြင်နိုင်အောင် Support တွေ နဲ့ Jungler တွေကတာ၀န်ရှိပါတယ်။ Team Fight အရှိန်မြှင့်နေချိန်မှာ Crowd Control အတွက် ကောင်းကောင်းတာ၀န်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဂိမ်းရဲ့ အနိုင်ရမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ Tanks နဲ့ Mages ကတော့ ဒီတာ၀န်ကို အဓိကယူရမှာပါ။
Support တွေက သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်တွေကို တစ်သင်းလုံးမှာပါ၀င်တဲ့ Champion တွေကို ကြည့်ပြီး ညှိနှိူင်းနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Synergy နဲ့ Lane မှာ ဘယ်သူနဲ့ အတူနေရမယ်ကို သုံးသပ်ရမှာပါ။
ဂိမ်းကို အနိုင်ရရှိဖို့ ဆိုရင်တော့ ရန်သူ့ဘက်က Nexus လို့ခေါ်တဲ့ အရာကို ဖြတ်စီးရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြေပုံရဲ့ အရေးကြီးသော နေရာတွေကိုနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Wild Rift ရဲ့ မြေပုံမှာ Lanes သုံးမျိုးရှိပြီး Baron Lane (Top), Mid Lane and the Dragon Lane (Bottom) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Lane တစ်ခုစီမှာ သူ့တို့ရဲ့ သက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ဘယ် Champion အမျိုးအစားတွေ က ဘယ်လိုသွားနိုင်တယ် ဆိုတာကိုသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Baron Lane ကတော့ Fighters, Assassins and Tanks တို့ farm တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ချင်း 1v1 lane ၊ Top Laners တွေက စိတ်ရှည်စွာ Baron Pits တွေကို စောင့်ကျပ်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားချိန် အလယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ သင့်တို့ အသင်းမှာ XP နဲ့ Item တွေ Baron တွေကို လုယူဖို့ နဲ့ တစ်ခြား အသင်းက သန်မာသူတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ အလုံအလောက်ရှိလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ အနီးမှာရှိတဲ့ မြစ်ကမ်းနားတွေ၊​ ရန်သူတွေရဲ့ Red Buff တွေ ၊ ကိုယ့် အသင်းက Blue Buff တွေကို ကောင်းစွာ မျက်ချေမပြတ်ပါစေနဲ့ ။ Mirrored Map ကိုဖွင့်ပြီး Wards တွေကို ကိုယ့် အသင်းက Red Buff တွေနဲ့ ရန်သူ အသင်းက Blue Buff တွေထည့်လိုက်ပါ။
Mage နဲ့ Assassin Champions တွေက ဒီ Lane ကို တာ၀န်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Lane ကို စောင့်ကြပ်သူကတော့ တီထွင်ကြံစပြီးတော့ Solo Kill တွေရယူနိုင်ပါတယ်။ Enermy ရဲ့ Gank တွေကို ရှောင်လျားပြီး ရန်သူတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရမှာပါ။ Mid Lane ကတော့ Gold နဲ့ XP တွေ ရယူနိုင်ပြီး ဒီ Lane က Champions တွေကတော့ အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးဖို့ တာ၀န်ရှိပါတယ်နော်။ အနီးမှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကမ်းနားတွေ နဲ့ ရန်သူ နဲ့ ကိုယ့်ဘက်က Raptors တွေကို အမြဲကြည့်နေပါနော်။
ဒီ နှစ်ယောက်နေလို့ရတဲ့ Lane မှာ ADC နဲ့ Support Champions တွေက စောင့်ကြပ်မှာပါ။ ဒီ ​Lane ကို ရယူအောင်နိုင်ဖို့ Character နှစ်ခုရဲ့ Teamworks အများကြီးလိုအပ်ပြီး Jungler နှစ်ယောက်ရဲ့ အပေးအယူလဲရှိရမှာပါနော်(အသင်းသားများလေ Burst Damge ပိုများလေ)။ Farm ပြီး Gank တွေကို အောင်နိုင်ဖို့ ဂိမ်းရဲ့ အစောပိုင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရမှာပါ။ Dragon ကတော့ Baron နဲ့ မတူဘဲ ဂိမ်းရဲ့ အစောပိုင်းမှာ Team Buffs ရရှိဖို့ တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အနီးမှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကမ်းနားတွေ Dragon Pit တွေ ၊ ကိုယ့်အသင်းက Red Buff တွေနဲ့ ရန်သူ အသင်းက Blue Buff တွေကို အမြဲကြည့်နေပါနော်။ Mirrored Map ကိုဖွင့်ပြီး Wards တွေကို ကိုယ့် အသင်းက Red Buff တွေနဲ့ ရန်သူ အသင်းက Blue Buff တွေထည့်လိုက်ပါ။
Jungle ကတော့ နည်းနည်းကျယ်တော့ Lane လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Jungle က မိမိတို့ အသင်း ကော ရန်သူအသင်းပါ မြေပုံရဲ့ တစ်ခြားနေရာတွေသွားဖို့ ဖြတ်ကျော်ရတာဖြစ်လို့ အရမ်းအရေးကြီးသောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူတွေ ခြုံခိုမတိုက်ခိုက်နိုင်အောင် Jungle ထဲ လျောက်သွားပြီး မြေပုံ ပတ်၀င်းကျင်ကို သိနိုင်အောင်လုပ်ပါ။
ကိုယ့် ရဲ့ Champion ကို့ ရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အပေါ်မူတီပြီး Runes ကို Set Up လုပ်လိုက်ပါ။ Enemies တွေကို Burst ဖို့ Damage ပိုလိုအပ်သလား? Enemies Crowd Control Abilities အတွက် Tenacity ပိုလိုအပ်သလား? ဒါမှမဟုတ် HP၊​ Armor နဲ့ Magic Defense ထက်လိုအပ်သလား?
မှန်ကန်တဲ့ Runes ကို ရရှိနိုင်တာက ကိုယ်ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်လို့ သေချာရွေးချယ်လိုက်ပါနော်။ Wild Rift အဖွဲ့ က Champion အားလုံးသုံးနိုင်တဲ့ Runes ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ ခုမှ စကစားတဲ့သူတွေအတွက် ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Rune ကို Menu မှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Champio​n ရွေးချယ်ရာနေရာမှာ ကိုက်ညီရာ ညှိနိုင်ပါတယ်။
Rift မှာတော့ Champions တိုင်းက Level 15 ကို ရောက်ရှိပြီး Ability Upgrades နိုင်ပြီး Item တွေ Build နိုင်ပါတယ်။ ရန်သူတွေထက်သာချင်ရင်တော့ Level လေးပိုမြင့်နိုင်ပါတယ်။
ခုမှ စကစားတဲ့သူတွေက စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ရန်သူတွေကို သတ်ဖို့ဘဲကြိုးစားပါတယ်။​ ဒီအမှားကို မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားပါနော်။​ Wild Rift မှာ Minion Farming ရယ် Champion တွေကို သတ်ဖို့ရယ် နှစ်မျိုးလုံးကို မျှတအောင်လုပ်ရပါမယ်။​ Minion တွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အမြဲအနိုင်ရရှိနိုင်ပြီး Champion တွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အမြဲမနိုင်နိုင်ပါဘူးနော်။​ ကိုယ်ရရှိနိုင်မယ့် Gold နဲ့ Experiences တွေ အတွက် စဥ်းစားလိုက်ပါ။​(သတ်နိုင်မယ့် လူကိုရှာရင်း အချိန်ကုန်နိုင်ပါတယ်)
Wild Rift က Items တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်း၀င်ချင်းကတော့ သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရန်သူတွေက AD ဖြစ်နေချိန်မှာ Magic Defense တွေနဲ့ ဘာလို့တက်ဆင်မှာလည်း? ကိုယ့်ရဲ့ အသင်းသားတွေက ရန်သူတွေရဲ့ Burst Damage ကိုတောင် မခံနိုင်ဘဲ ဘာလို့ Damage Items တွေတည်ဆောက်နိုင်မှာလည်း? ဒါတွေက Items တွေမလုပ်ခင် ကိုယ့်ကိုကိုမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ အနိုင်ရရှိအောင် ကိုယ့် Match Up အပေါ်မူတီပြီး Items တွေရွေးချယ်ပါ။
ဒီမှာ သင်ယူခဲ့ရတာတွေကို အကျဥ်းချုပ်ရလျှင် ဂိမ်းမှာအနိုင်ယူချင်လျှင် ဒီ လွယ်ကူတဲ့ အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်တာလေးတွေကို မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မြေပုံသိရှိမှုကလည်း သင့်ရဲ့ ကစားပုံကို အကျိုးပြုစေပါတယ်။ နောက်ထပ် Champions တွေရဲ့ Skills ၊​ Playstyle နဲ့ Battle Combinations အကြောင်း တွေကို ဆက်လက်တင်မှာမို့လို့ စောင့်မျှော်နေပါအုန်းနော်။
Previous articleပရုိမုိးရွင္းထဲသုိ႔ပါ၀င္ပါက သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား။
Next articleFree Fire ဟီးရိုးတွေအကြောင်း: K လို့ခေါ်တဲ့ Captain Booyah ဆိုတာ